Ven. Ashin Jeyapandita Vipassana workshop daily Schedule	ဇွန်လ ၂၄ မှ ၂၈ ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပမည့် ဆရာတော်အရှင် ဇေယျပဏ္ဍိတ ၏ ဝိပဿနာသင်တန်းအချိန်ဇယား။ Ven. Ashin Jeyapandita Vipassana workshop daily ScheduleThis information was given by U Aung Koe. Ph. (612)-819-2626 ဦးအောင်ကိုးတို့မိသာစုဓမ္မဒါနအဖြာဖြာ	မင်္ဂလာပါ...ဦးအောင်ကိုး၊ဒေါ်မြင့်မြင့်သူ၊သား မောင်အောင်ကျော်ထူး၊သမီးမစုစုအောင်ကိုး မိသားစု၏ ဓမ္မဒါန-ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ထေရုပတ္တိအကျဉ်းဘုရားရှိခိုး(၁)ဘုရားရှိခိုး(၂) လေးစားစွာဖြင့်ဝင်းမြင့် (ဆိုဒ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးတာဝန်ခံ)
Retreat And Dhamma Talk Schedule For Pilot Sayadaw in America for 2009	Retreat And Dhamma Talk Schedule For Pilot Sayadaw in America for 2009 Date Place of Retreat and Dhamma Talk Contact Person&Phone May 21st Arrival to San Franscisco Airport May 23rd Dhamma Nanda Vihara 17450 South Cabrillo Hwy Half Moon Bay CA 94019 Dr. Than Than Aye (650)-892-9506 May 28th –May 31st Los Angeles , 3529 Crooked Creek Diamond Bar CA 91785 Dr. Ko Zaw Myint (909)-618-4209 June 1st –June 7th Thanti Thitsar Meditation Center 2540 Monroe St Riverside CA 92504 Dr Khin Thi Oo (951)-352-4680 June 9th – June 15th Burma Buddhist Association, 15 W 110 Forest Lane Elmhurst Illinois 60126Dr.Zaw Win (708)-710-1089 June 16th- June 22nd Theravada Buddhist Association of America, 4406 Windy Hill Rd. Randallstown, MD 21133 Dr. Thaw Poon (410)-215-3860 June24rd –June29th Sitagu Dhamma Vihara 1519 County Rd. E Maplewood MN 55109 U Aung Koe (612)-819-2626 June 30th –July 4th Sirimangala Buddhist Monastery 12634 NE Russell Street Portland OR97230 Ashin Sirinda (503)-253-5318 July 5th -July 12th Dhamma Rakhita Monastery Society Of Theravada Buddha Sasana 8133 Hartzell Rd Fort Wyane IN 46816 U Wisakhana (260)-447-9009 July12th- July 14th Dhammaparla Monastery 1725 Elmira Street Aurora CO80010 U Sandimar (260)-399-6668 (303)-343-3608 July 15 Back to California July 17th Back to Yangon ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရား ၏အမေရိကခရီးစဉ်	ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရား ၏အမေရိကခရီးစဉ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီး သည် ယခုအခါအမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဘုရား တိုက်ကျွေးမည့် တရားရေအေး အမြိုက်ဆေးကို ခံယူသောက်သုံးလိုပါက အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များတွင် စုံစမ်းနိုင်ပါကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အား သတင်းကောင်း ပါးပါရစေရှင့်။ Until 31st May 2009-------Dr. Than Than Aye -65089295061st June 2009 to 7th June 2009----- Dr. Khin Thi Oo -95135246808th June 2009 to 15th June 2009----Dr. Zaw Win -7087101089
« Start Prev 12345 Next End »	Page4of 5	ဆက်သွယ်ပြောကြား စကားများ